धरहराका इँटा होटल र रेस्टुरेन्टमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २०, २०७६ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — चारखाल मालपोत कार्यालयछेउ इचिबान नामको रेस्टुरेन्ट छ । यसलाई नेपाली वास्तुकला झल्कने मयूर झ्याल, आँखी झ्याल आदिले सजाइएको छ । भित्र पस्दा रिसेप्सनको ठीक पछाडि भित्तामा नौवटा हार लगाएर इँटा टाँसिएका छन् । टाँसिएका इँटाको छेउछेउमा फ्रेम हालेर आकर्षक देखाइएको छ ।
प्रत्येक इँटामा ‘श्री ३ चन्द्र’ लेखिएको छ । हलको बीचतिर पनि यस्तै इँटाले सजाइएको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०१३ का अनुसार पुरातात्त्विक सम्पदामा प्रयोग गरिएका कुनै पनि वस्तु व्यक्तिका घरमा राख्नु वा व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउनु गैरकानुनी हो । ‘पुरातात्त्विक महत्त्वका सामान व्यक्तिको घरमा राख्न पाइँदैन,’ पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले भने ।
पुरातात्त्विक महत्त्वका यस्तै इँटा बबरमहलको बसेरा बुटिक होटलमा पनि राखिएको तस्बिर पत्रकार कसिसदास श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् । श्रेष्ठले श्री ३ चन्द्र लेखेको धरहराको इँटा निजी होटलमा प्रयोग भएको फोटो ट्वीटरमा पोस्ट गरेका थिए । ‘मैले धरहराको इँटा भेटें,’ श्रेष्ठले भने, ‘होटलमा सोधपुछ गरेर कन्फर्म भएपछि सार्वजनिक गरेको हुँ ।’ उक्त होटलमा ६० वटा कोठा छन् । प्रत्येक कोठामा यस्ता एक–एकवटा इँटा फ्रेमभित्र राखिएको श्रेष्ठले बताए ।
केही महिनाअघि मात्र सञ्चालनमा आएको यो होटल नेपाली वास्तुकला झल्कने गरी बनाइएको छ । बसेरा होटलकी व्यापार संयोजक हेलेन घिमिरेले भने धरहराको इँटा प्रयोग नगरेको दाबी गरिन्, तर ती पुरातात्त्विक महत्त्वका इँटा कहाँबाट आए भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ उनले दिन सकिनन् या चाहिनन् । इचुबानका सञ्चालकले पनि यस्तै जवाफ दिए ।
‘हामीले किन्दा यहाँ यसैगरी इँटा सजाइएको थियो,’ इचुबानका सञ्चालक कुमार कट्टेलले भने, ‘हामीले सञ्चालन गरेको एक वर्षमात्रै भयो ।’ पुरातात्त्विक महत्त्वका सामग्रीको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने उदाहरण हुन् यी दुई ठाउँमा प्रयोग भएका इँटा । संरक्षणविद् रवीन्द्र पुरीका भनाइमा कतै बुझेर र कतै नबुझेर पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तुहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तुको स्थानान्तरणमा पनि बन्देज लगाएको छ । ‘स्थानान्तरण गर्न पाइँदैन भनेर ऐनले किटान गरेको छ,’ संरक्षणविद् पुरीले भने, ‘यस्ता सामान ओसारपसारसमेत गर्न पाइँदैन । किनबेचको त कुरै छाडौं ।’ २०७२ सालको भुइँचालो जानासाथ धरहराका इँटा भन्दै टिपेर लैजाने होडबाजी नै चलेको उनले बताए । पुरीलगायत संरक्षणविद्हरूले आवाज उठाएपछि सुन्धाराबाट उठाएर धरहराका इँटा टुँडिखेलमा राखिएको थियो । ‘हामीले सुरुमै सचेत गराएका थियौं,’ पुरीले भने, ‘हामी कराएपछि टुँडिखेलमा लगेर राखियो, तर त्यहाँ पनि सुरक्षित भएजस्तो लागेन ।’
इचिबान रेस्टुरेन्टमा ‘श्री ३ चन्द्र’ लेखिएका इँटा ।
धरहरालगायत भूकम्पका बखत भत्केका अन्य सम्पदाका इँटालगायत वस्तुहरूको संरक्षण गर्न नसकिएको पुरातत्त्व विभागले पनि स्विकारेको छ । ‘संग्रहालयमा सबै राख्ने कुरा भएन, नमुना राख्ने हो,’ कुँवरले भने, ‘धरहराको पनि नमुना इँटा संग्रहालयमा राखेका छौं ।’ सम्पदामा प्रयोग भएका सामान नमुनाका रूपमा संग्रहालयमा राखेपछि अरू त्यहीं कतै गाडिदिने गरिएको कुँवरले बताए । ‘उत्खनन गर्दा पनि केही नमुना राखिन्छ, अरू गाडिन्छ,’ कुँवरले भने, ‘बढी भएको त्यतै डम्प गरिन्छ ।’ सम्पदाका प्रत्येक टुक्रासमेत बहुमूल्य मानिन्छ । ऐतिहासिक, दुर्लभ, कलात्मक पाटो हेरेर यसको महत्त्व निर्धारण गरिने कुँवरले उल्लेख गरे । अभिलेखसहितको इँटाले कुनै कालखण्डको इतिहाससमेत जनाउने भएकाले त्यसलाई ऐतिहासिक मूल्य भएको वस्तुको सूचीमा राखिन्छ । कुँवरका अनुसार धरहरामा श्री ३ जुद्ध र श्री ३ चन्द्र लेखिएका इँटा प्रयोग भएका छन् । अभिलेखसहितको इँटा बनाउने प्रचलन लिच्छविकालदेखि नै चलेको मानिन्छ । लिच्छवि राजाहरू मानदेव र अंशुबर्माको नाम अंकित इँटाहरूसमेत भेटिएका छन् ।
संरक्षणको सिद्धान्तअनुसार सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा पहिला प्रयोग भएका काम लाग्ने सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ । धरहरा संरक्षणको सिद्धान्तअनुसार पुनर्निर्माण भइरहेको छैन । अहिले बनाइँदै गरेको धरहरामा लिफ्टसहित आधुनिक सुविधा प्रयोग गरिनेछ । संरक्षणविद्ले यसलाई नक्कली धरहरा भन्दै आएका छन् । ‘यो नक्कली धरहरा हो,’ वास्तुकलाविद् सुदर्शनराज तिवारीले टिप्पणी गरे, ‘यहाँ हाम्रा प्राचीन सीप, सामग्री, प्रविधि सबै नष्ट हुँदै छ ।’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरामा पुराना इँटा प्रयोग नगर्ने गरी लागत स्टिमेट तयार पारेको छ ।
भीमसेन थापाले बनाएको धरहराको ठुटोलाई सिसाको फ्रेम लगाएर जोगाउने प्राधिकरणको योजना छ । प्राधिकरणबाट रहरा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका विज्ञ राजु मानन्धरका अनुसार अहिले धरहराको काम लाग्ने इँटा एउटै छैनन् । ‘हामीले भुइँचालो गएको तीन वर्षपछि धरहराको जिम्मा लिएका हौं,’ मानन्धरले भने, ‘हामीले जिम्मा लिँदा सग्लो इँटा एउटै थिएनन् । टुटेफुटेका मात्रै बाँकी थिए । त्यसलाई तारबार लगाएर सुरक्षित राखेका छौं ।’ राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाले धरहरा बनाएर मुलुकमा मुगल शैलीको संरचना भित्र्याएका थिए । उनले आफ्नो निवास बागदरबार छेउमै वि.सं. १८८१ सालमा धरहरा बनाएका थिए । थापाले यो धरहरा बनाएको अर्को वर्ष रानी त्रिपुरासुन्दरीले अर्को धरहरा बनाउन लगाइन् । यी दुवै धरहरा बनाउँदा थापा प्रधानमन्त्री थिए । १९९० सालको भुइँचालोले यी दुईमध्ये थापाले आफ्नो निवासछेउ बनाएको धरहरा ढल्यो ।
हालको धरहरामा चाहिँ आंशिक क्षतिमात्रै पुगेको थियो । ९० सालमा भुइँचालो आउनु पहिला नै चट्याङ परेर धरहरामा क्षति पुगिसकेको थियो । ११ तले धरहरालाई ९० सालको भुइँचालोपछि १९९२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले ९ तलामा झारेर पुनर्निर्माण गराएका थिए । त्यसबेला त्यसमा पुरानै इँटा प्रयोग गरिएको पुरीले बताए । ‘जीर्णोद्धार गर्दा पुराना सामान बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्छ,’ पुरीले भने, ‘जति पुराना सामान प्रयोग गर्‍यो, उति नै यसको प्राचीनता कायम रहन्छ ।’
साधारणतया छेउ चोइटिएको, बीचमा चर्किएको तर पूर्णतया भारवहन गर्न सक्ने इँटा मौलिक रंग केही फुस्रिएको भए पनि प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने
पुरातत्त्वविद् बताउँछन् । पुरातत्त्वविद् विष्णुराज कार्कीले भने, ‘प्रयोग भएका इँटा प्रयोगमा नआई टुटुफुट भएमा, कलात्मक इँटामा रहेको कलापक्ष पूर्णतया नष्ट भएमा तिनकै नाम, आकार, कलाकृति र गुणस्तर भएका नयाँ इँटा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा यस्तो इँटा परीक्षण गर्ने ल्याब पनि छ । कार्कीका अनुसार पुराना इँटाको भारवहन क्षमता कमजोर हुनसक्छ । नुनिलो पदार्थ उत्पन्न भयो भने भारवहन क्षमता कमजोर हुन्छ । यस्तो अवस्था आएमात्रै नयाँ इँटा प्रयोग गर्नुपर्छ । नयाँ इँटा प्रयोग गर्दा पनि गुणस्तर भने कायम गरेको हुनुपर्छ । पूर्ण रूपमा पोलिएको, फोका नउठेको, नडढेको र सतह मिलेको इँटालाई गुणस्तरीय मानिन्छ ।
धरहराको निर्माणमा चुनासुर्कीको जोडाइ र इँटाको गाह्रो थियो । यसको डिजाइन मुगल कालीगढले गरेका थिए । सबभन्दा माथिल्लो भागमा गुम्बज बनाई सुनको जलप लगाइएको धातुको गजुर थियो । धातुको गजुर राष्ट्रिय संग्रहालय, छाउनीमा लगेर राखिएको कुँवरले बताए । अन्य पुराना सामान प्रयोग नभए पनि आधुनिक धरहरामा गजुरचाहिँ राखिने मानन्धरले जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले मागेका बेलामा गजुर दिन्छौं,’ कँॅवरले भने । पुरातात्त्विक महत्त्वका इँटाहरू भने फर्काउन सजिलो छैन । काठमाडौं उपत्यका र यसका आसपास प्रयोग गरिने चिल्लो र सादा इँटालाई नेवारी भाषामा दाची अपा भनिन्छ । दाची अपालाई सम्पदा कलात्मक बनाउन प्रयोग गरिन्छ । ‘सम्पदा पुनर्निर्माणमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधरले भने, ‘यति महत्त्व भएको इँटा व्यक्तिको घरघरमा पुग्नु दुःखद कुरा हो । हराएका यस्ता पुरातात्त्विक वस्तुको चर्चा नै हुने गरेको छैन । यसमा अब बहस हुनुपर्छ ।’ प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०७:२५
पौडीको व्यक्तिगत स्पर्धामा नेपाललाई पहिलो स्वर्ण
मंसिर २०, २०७६ राजु घिसिङ
काठमाडौँ — दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को इतिहासमै पौडीको व्यक्तिगत स्पर्धामा नेपाललाई पहिलो स्वर्णपदक दिलाएपछि गौरिका सिंहले भनिन्, ‘धेरै मान्छेले मलाई तिमी बाहिर बस्ने हो, नेपाली होइन भन्छन् । म त नेपाली हुँ । यो मेडल नेपाललाई नै हो ।’
सातदोबाटोमा अन्तिम समयमा तयार पारिएको हिटिङ सिस्टमको नयाँ स्विमिङ पुलमा स्वर्ण जितेपछि गौरिकाले दिएको प्रतिक्रिया धेरैका लागि सांकेतिक जवाफ थियो । उनकै उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेपाली टिमले रिलेमा कांस्य पनि हात पार्‍यो ।
नेपाली पौडी क्षेत्रकै धेरैले उनलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट रोक्ने प्रयास गरेका थिए । सानोमै बाआमासँग लन्डन पुगेकी उनी उतै बस्छिन् । पढ्छिन् । स्विमिङ ट्रेनिङ गर्छिन् । स्कुल, कलेज बिदा हुँदा र पौडी प्रतियोगिताका बेला स्वदेश आउँछिन् ।
११ वर्षको छँदै सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै गौरिकाले आठ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । २०७१ साउनको त्यो राष्ट्रिय खुला पौडीले ठूलै हलचल ल्यायो । उनी नियमित रूपमा प्रतियोगिता खेल्न आइन् । १२ औं सागमा तीन वर्षअघि १ रजत र ३ कांस्य जित्दै व्यक्तिगत स्पर्धामा पदक जित्ने पहिलो नेपाली स्विमर भइन् । एकपछि अर्को कीर्तिमान बनाइरहिन् । सफलताले कथा बुनिरहेकै बेला उनीविरुद्ध पौडी जगत्मा भने ठूलै चलखेल भयो ।
उनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिन अरू खेलाडीका अभिभावकले हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । पौडी संघले सीमित स्पर्धामात्रै खेल्न पाउने नियम ल्यायो । तर, गौरिका रोकिइनन् । उनले २ मिनेट ५.०६ सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउँदै बिहीबार २ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा स्वर्णपदक जितेकी हुन् । त्यसक्रममा उनले भारतकी सिवांगी शर्मालाई २.१३ सेकेन्डले पछाडि पारिन् । पाँच देशका आठ खेलाडी सहभागी स्पर्धामा जनुयना अहमद (२ः१२.८३) ले कांस्यपदक हात पारिन् । गौरिकाले हिटमा बनाएको २ मिनेट ९.१९ सेकेन्ड पनि गत वर्ष आफैंले बनाएको राष्ट्रिय कीर्तिमानको बराबरी हो । ‘दर्शकको सपोर्ट एकदमै राम्रो भयो । समय पनि सोचेभन्दा राम्रो आयो,’ १७ वर्षीया उनले भनिन् ।
रियो ओलम्पिक २०१६ मा दस हजारभन्दा बढी खेलाडीमध्ये सबभन्दा कम उमेरकी खेलाडीका रूपमा चर्चित गौरिकाले १३ औं सागको स्वर्णबारे भनिन्, ‘मेरो त सातो उड्यो । सबैले खुसियाली मनाए, जसलाई म वर्णन नै गर्न सक्दिनँ । जस्तो ओलम्पिक, त्यस्तै महसुस भयो ।’ उनले १२ औं सागमा २ सय मिटर इन्डिभिज्युअल मिड्ले रजत, १ सय र २ सय मिटर ब्याकस्ट्रोक तथा ४ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा कांस्य हात पारेकी थिइन् ।
‘जहिले पनि हार हुन सक्छ,’ प्रतिस्पर्धाबारे उनले भनिन्, ‘आफ्नो उत्कृष्ट दिने प्रयास मात्रै गर्न मिल्छ । आज मैले त्यो गरेँ । जित्नका लागि मेरो उत्कृष्ट प्रयास पर्याप्त भयो । खुसी छु ।’ बुबाआमासँगै लन्डनबाट सोमबार काठमाडौं आइपुगेकी उनले थपिन्, ‘मैले जितेको पदक नेपाल र मेरा अभिभावकलाई समर्पित गर्छु ।’ उनले चार गुणा ४ सय मिटर फ्रिस्टाइल रिलेमा डुआना लामा, टिसा शाक्य र अनुसिया तन्डुकारसँगै ४ मिनेट १२.१७ सेकेन्डका साथ कांस्य हात पारिन् ।
घरेलु टिमले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएको यो स्पर्धामा भारतले स्वर्ण र श्रीलंकाले रजत जिते । १३ वर्षीया डुआनाले २ सय मिटर ब्रेस्टस्ट्रोकमा २ मिनेट
४४.६८ सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित रजतपदक हात पारिन् ।
गौरिकाले सागमा केन्द्रित भएर लन्डनस्थित क्याम्देन स्विस कटेज स्विमिङ क्लबमा प्रशिक्षक एडम टेयलरसँग तयारी गरेकी थिइन् । उनले सातामा १८ घण्टासम्म (नौ सेसन) अभ्यास गरिन् । उनी विशेषगरी ब्याकस्ट्रोक र फ्रिस्टाइलमा राम्रो मानिन्छिन् । उनको रोजाइ मध्यम दूरीका स्पर्धाहरू हुन् । यो सागमा उनको नाम नौ व्यक्तिगत र ३ टिम स्पर्धामा दर्ता गरिएको छ । शुक्रबार २ सय मिटर ब्याकस्ट्रोकमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । दुई स्पर्धा सँगसँगै परेकाले उनले ४ सय मिटर इन्डिभिज्युअल मिड्ले भने छाड्ने बताइएको छ ।
अरू स्पर्धाबारे उनले भनिन्, ‘भोलि राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, थाहा हुँदैन । म राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछु ।’ ‘सर्ट कोर्स’ को नयाँ पुलबारे उनले भनिन्, ‘पुल एकदम राम्रो छ । बेलायतको जस्तै । चिसोमात्रै बढी हो । अरू सबै ठीक छ । राम्रो छ ।’ आफ्ना समर्थकबारे बोलिन्, ‘अनौठो लाग्छ, मेरा फ्यान पनि छन् । म अरू मान्छेको फ्यान हो, मेरा फ्यान पनि छन् र ? जस्तो लाग्छ ।’
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०७:१९